“Maanta arrintaa weyn ee doorashada inaynu qabano ayaa ina hor taala” Cirro | Berberanews.com
Home WARARKA “Maanta arrintaa weyn ee doorashada inaynu qabano ayaa ina hor taala” Cirro
“Maanta arrintaa weyn ee doorashada inaynu qabano ayaa ina hor taala” Cirro
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka Waddani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa maanta dalka dub ugu soo laabtay.
Guddoomiye Cirro oo lagu soo dhaweeyay Madaarka Hargeysa, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee la filayo inay Somaliland ka qabsoomaa iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha.
“Waa Ilaahay mahadii inaynu maanta ka hadalno oo soo gaadhno inaynu doorasho iyo diiwaangelin u diyaar garowno. Arrintaasi wakhti dheer bay naga qaadatay, muran badan bay nagu qaadatay, oo laba sannadood ka badan, laakiin sidaad ka warqabteen waa laga heshiiyay arrintaas.”
Guddoomiye Cirro wuxuu sheegay in wixii hagardaamo ah laga ilaaliyo habsami u socodka doorashooyinka Deegaanka iyo Wakiillada, isagoo arrintaa ka hadlayana waxaa uu yidhi, “Maanta arrintaa weyn ee doorashada inaynu qabano ayaa ina hor taala, weliba waa markii u horraysay ee laba doorasho aynu wada qabano, insha alaa waanaynu ku guulaysan doonaa. Marka waxaynu u baahanahay arrintaa aynu soo wadnay in laga ilaaliyo wixii hagardaamo ah iyo wixii dibin daabyo ah iyo wixii caqabad ah.”
Guddoomiye Cirro wuxuu carrabka ku akeeyay in xukuumad iyo asxaaba loo wada taageero sidii doorashadu u dhici lahayd, “Dhammaan asxaabta qaranka, xukuumadda iyo madaxweynuhu waa in arrintaa sidaynu ugu tallogalay iyo wakhtigii aynu ugu tallogalay ay inoo qabsoomaan.”
Previous articleArmenia oo xamaanta ka guratay qaybtii u horraysay ee Dhulka Karabaakh iyo guryo ka gubay
Next articleQarax dhimasho iyo Dhaawac sababay oo ka dhacay Muqdisho